some mistakes …. from Myanmar TV ( longtime ago ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » some mistakes …. from Myanmar TV ( longtime ago )
some mistakes …. from Myanmar TV ( longtime ago )
Posted by fatty on Oct 3, 2010 in Entertainment | 10 comments
from TV dept: mistakes Myanmar SB TV
မြန့်မာ့အသံနဲ့ပါတ်သက်လို့အသံလွှင်တဲ့အကြောင်းတွေကို စာအုပ်အဖြစ်ထုပ်ဖူးတာ မြန့်မာ့အသံ ဦးကျော်ဦးပါ။ ကျနော်တို့ဆရာပေါ့။ ….. အခုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ေ၇းလို့ရတုန်း ကျနော်က ဖေါက်သည်ချရတဲ့သဘောပါ။ အဲဒီမှာလုပ်တုန်းကလည်း ရေးခဲ့ပါတယ်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာလည်း SB ကခေါ်းပြီးစစ်ဆေးခြင်းခံရပါတယ်။
အခုတော့လွတ်လပ်ပြီပေါ့ …. ကျနော်ရှိစဉ်က မြန်မာ့အသံရုပ်မြင်သံကြားမှာ … ခတ် တည်တည်နဲ့ လူမသိသူမသိ မှားခဲ့ရတာလဲရှိခဲ့သလို … တတိုင်းပြည်လုံးသိပြီး
၀က်ဝက်ကွဲ အရှက်ကွဲခဲ့တာမျိုးလဲရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ …..
ပထမဆုံးတခုပြောချင်တာကတော့ မတတ်သာလို့လိမ်ခဲ့ရမှုပါ။ ………………………….
ဟိုတုန်းက သတင်းကြေငြာပြီးရင် မိုးလေ၀သ သတင်းလွှင့်ပါတယ် ။ အခုလို မိုးလေ၀သဌာနကလာပြီး ဖတ်တာမဟုတ်သေးပါဘူး ဒီက announcer ကဘဲဖတ်ပေးရတာပေါ့
အခုတော့ရိုက်ကူးရေးတောင် မိုးလေဌာနကဘဲသူတို့ဖာသာလုပ်နေပြီလားမသိဘူးဗျ။ အဲဒီတုန်းကထဲက သူတို့ဖာသာရိုက်ဖို့စီစဉ်နေတာတော့ကြားမိပါတယ်။
ဟိုတုန်းကတော့မိုးလေ၀သ သတင်းကို သူတို့ဌာနက ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ ညနေဘက်ဆိုနေ့တိုင်းလာလာပို့ရပါတယ်။ သတင်းစာသားရယ် ဂြိုလ်တုဓာတ်ပုံရယ်ပေါ့ ..
တရက်တော့မိုးတွင်းကြီးပေါ့ဗျာ … ညနေပိုင်းရောက်ရမဲ့မိုးလေ၀သသတင်းက ရောက်မလာဘူးဗျ။ ကျနော်တို့က သတင်းရောက်လာရင် ပုံတွေကိုချိတ်ပြီး ကင်မရာနဲ့ရိုက်
announcer က သတင်းဖတ် ယောက်က တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကို pointer နဲ့ထောက်ရပါတယ်။
သတင်းဖတ်တဲ့သူကလည်း မိုးလေသတင်းဖတိပြီးရင် မိတ်ကပ်ခန်းပြေးပြီး ပြင်ဆင်ရအုံးမှာကိုး … ဒါကြောင့်ဘယ်ကိစ္စမဆို ချိန်ကိုက်ပြိးလုပ်ရပါတယ်။ မြန်မာ့အသံမှာအရးကြီးဆုံးက အချိန်ပါဘဲ … မြန်မာစံတော်ချိန်လေ ….
အဲဒီလိုနဲ့ မိုးလေသတင်းက အချိန်မီရောက်မလာ ဌာနဖုံးဆက်တော့လဲ ထွက်သွားပုံမှန်အချိန်ဘဲတဲ့ … လမ်းမှာတခုခုဖြစ်နေဟန်တူပါတယ် ..ဆိုင်ကယ်ဘဲမှောက်နေသလးပေါ့။ အရေြးီ့းတာက ကျနော်တို့က အဲဒီနေံ့အတွက်မိုးလေသတင်းရိုက်စရာမရှိဘူးဖြစ်နေပြီ … သတင်းဖတ်ရမဲ့သူကလည်း သူက ၈ နာရီသတင်းအတွက် ပြင်ရဆင်ရအုံးမယ်လေ။ …..လူကြီးတွေတင်ပြ လူကြီးတွေကလည်း ရုတ်တရက်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိပေါ့ .. အကြီးအကျယ်အကြံအိုက်ကုန်ကြပြီပေါ့ဗျာ။
…အဲဒီမှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့အကြံဘယ်သူပေးလိုက်လဲတောင်မမှတ်မိတော့ဘူးဗျ ။ ….ဒီလို …အဲဒီခေတ်ကမိုးလေသတင်းလာတဲ့အချိန်ဆို tv ကြည့်နေသူတွေထပြီးသေးပေါက်တဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာ … ဘယ်သူမှ စိတ်ဝင်စားကြတာမဟုတ်ပါဘူး ..ဒိတော့ အကြံအဖန်လုပ်ကြရတာပေါ့… ခပ်တည်တည်နဲ့ မနေ့ံ့ကရိုက်ပြီးသားကြီးကို ရက်စွဲတွေပြင်ပြီး … ဒီကနေ့မိုးလေသတင်းအနေနဲ့ရောကြိတ်ရတာဘဲဗျို့ …ဘယ်သူမှမသိလိုက်ပါဘူး ..တကယ်ဆိုဘာမှမဟုတ်မေမဲ့ …ကျနော်တို့အတွက်တော့ မဟာစွန့်စားခန်းပါဘဲ …. ဘယ်သူမှမသိအောငိတိုင်းပြည်ကိုညာလိုက်တာပေါ့နော ..ဟဲဟဲ …။
………….. နောက်အမှားတခုကတော့ တနိုင်ငံလုံးကို ရုပ်ရှင်တခုမှားပြီးလွှင့်မိတာပါဘဲ။ စစ်ကိုင်းမြို့ကနေ အတက်မြန်မာပြည်ကိုစပြီးလွှင့်တဲ့နေ့ပေါ့ …ဖွင့်ပွဲနေ့ဆိုပါတော့ …. နောက်တခါမှတင်ပြပါရစေ။ …………
မိုက်လှချည်လားကိုကြောင်ကြီးရ ။ ဒါမျိုးဆိုရေးတတ်ပါ့ ။
fatty ရေ ဒီလိုအဖြစ်ပျက်လေးတွေတင်ပေးတာကောင်းပါတယ် ဗဟုသုတရတာပေါ့ ။ ရှိသေးရင်လည်းထပ်တင်ပေးပါဦး ။
ဦးဖက်တီးကို Jackie ဖက်တီး လို့ ပြောင်းခေါ်ချင်တယ်။
ko fatty ဆက်ရေးပါအားပေးနေပါတယ် တချိန်ကမြန်မာ့အသံကဝန်ထမ်းတွေရဲ့အကြောင်းဆောင်းပါးလေးတွေဖတ်ဘူးတယ် ဒါမျိုးဆောင်းပါးလေးတွေဖတ်ချင်နေတာ ရေငတ်တုန်းရေတွင်းထဲကျသွားတာပေါ့ဗျာ…….
၁။ ဆူး …. ရဲ့အားပေးနေပါတယ်…ဆိုတာနဲ့အားရှိနေပါပြီ။
၂။ bigcat ရေ ..ဘုရားဘုရား …အချုပ်အနှောင်ခံရကိန်းရှိမရှိ ဗေဒင်သွားမေးပြီးမှဆက် ရေးတော့မယ်နော်…။..
၃။ eros ခင်ဗျား …ကျနော်အရှာင်အတိမ်းမကောင်းလှပါ …..။
၄။ tunaung ..ေ၇ …ေ၇များငတ်ရင်ေ၇သန့်လေးဝယ်သောက်ပါလားကွယ် …. ဦးဖက်တီးကတော့ keyboard ပေါ်လက်တင်တာတောင် ခပ်တုန်တုန်ဖြစ်နေပြီ …။
အာ ဦးဖက်တီးကလဲ Jackie Chan ဆိုရင် ဇာတ်လမ်းအသိမ်းဆိုရင် သူလွဲခဲ့တာတွေ ပြန်ပြတာလေ။ ဒါကြောင့် ဦးဖက်တီးကို Jackie ဖက်တီးလို့။ မြန်မာ့အသံက ၀န်ထမ်းတွေကိုလေးစားပါတယ်။ အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးကို ကျော်လွှားနိုင်လို့။ ငယ်ငယ်တုန်းက Magazine တအုပ်ထဲမှာ ဇာတ်လမ်းပမာ နားဆင်စရာထဲမှာ “ဟာ၊ ရွာထဲရေတွေ ၀င်လာပြီ” အစား “ရေထဲ ရွာတွေဝင်လာပြီ” လို့ မှားပြောမိတဲ့ အကြောင်းလေး ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ဆက်လက်အားပေးပါဦးမယ်။ နောက်ဆုံး ၂၅ ကျပ်တန်နဲ့ ၀ယ်ခံရတဲ့ အဒေါ်ကြီး အကြောင်းသိသွားတဲ့ အခါ ဘာပြောလဲ သိခွင့် ရရင်သိချင်ပါတယ်။
အဲဒီအဒေါ်ကြီးကလေ …. အဲလိုမျိုးသတင်းဆို နောက်တခါသူ့ကိုအရင်ပြောပါတဲ့ …. အခုထိရှိသေးလားတော့မသိဘူး မြန်မာ့အသံဝင်း တောင်ဘက်က ကွမ်းယာဆိုင်
ဒုတိယအကြိမ် ကြေငြာတော့ ရနကုန်ကလူတွေနပ်ကုန်ပြီ …. တောဘက်သွားပြီး ပိုက်ဆံတွေ သုံးရတယ်။
Long time ago က ဆို တော. အ ခု ဆို ရင် အဲ. ထက် ပို ဆိုး နေ မ လား ပဲ နော် ???